यात्रु बोक्ने मोटरसाइकललाई कारबाही गर्ने – Waikhari
गृहपृष्ठ Featured यात्रु बोक्ने मोटरसाइकललाई कारबाही गर्ने
यात्रु बोक्ने मोटरसाइकललाई कारबाही गर्ने
‘टुटल एप’ को सुरूआत पनि प्रविधिले ल्याएको त्यस्तै अवसर हो।
करिब दुई वर्षअघि शिक्षित भट्टले ‘टुटल एप’ चलाएर मोटरसाइकलबाट यात्रु ओसार्न सकिने अवसर देखे। सार्वजनिक सवारी भरपर्दो नभएको र ट्याक्सी ठगी व्यापक रहेको काठमाडौंमा यो सम्भावनायुक्त व्यवसाय थियो।
‘काठमाडौंजस्तो व्यस्त ठाउँका लागि मोटरसाइकल भरपर्दो सवारी हो,’ उनले भने, ‘मोटरसाइकल वा स्कुटर भएका युवाहरूको निम्ति यो रोजगारको अवसर पनि हो।’
‘यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार रातो नम्बर प्लेटको सवारीले भाडामा मान्छे वा सामान आोसार्न पाउँदैन भनेर हामीलाई रोक्ने हो भने खाना डेलिभरी गर्नेलाई पनि रोक्नुपर्‍यो। अनलाइन सपिङको सामान डेलिभरी पनि रोक्नुपर्‍यो। विवाह वा घुमफिरका लागि रातो नम्बर प्लेटको गाडी प्रयोग गर्न दिनु भएन,’ भट्टले भने।
‘सरकारले हामीलाई नियम बनाओस्, हामी त्यसैमा चल्छौं,’ उनले भने, ‘अध्ययनै नगरी बन्देज लगाउनु कतिसम्म जायज छ?’
‘यस्तो सेवा दिने संस्था किन बन्द गर्ने? बन्द गर्ने भए सरकारले विकल्प दिनुपर्‍यो,’ उनले भने।
‘म मार्केटिङको काम गर्छु, दिनभरि मोटरसाइकलमा डुल्छु। पछाडिको सिट खाली छाडेर हिँड्नुभन्दा मान्छे चढाए पैसा आउँछ भने के अपराध भो?’ उनले भने, ‘मैले सस्तोमै सेवा दिइरहेको छु। यात्रुलाई पनि फाइदा छ। सरकारले यसलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा निरुत्साहित किन गरेको हो, मैले बुझेको छैन।’
‘एक जना मान्छेका लागि ट्याक्सीमा जानु र मोटरसाइकलमा जानुमा कुनले बढी इन्धन खपत गर्छ? यसको आर्थिक पक्ष पनि हेर्नुपर्छ,’ थापाले तर्क गरे।
‘नीति बनाउने मान्छेले बहसमा ल्याउनुपर्‍यो। ऐन संशोधन गर्नुपर्‍यो। ऐन संशोधन नभइन्जेल यो गैरकानुनी हो। त्यसैले हामीले कारबाही गरेका हौं,’ पन्तले भने।